“Mourinho wuxuu heystaa fursad uu ku qoro sheeko xiiso leh ee taariikhda Premier League” – Gary Neville – Gool FM
“Mourinho wuxuu heystaa fursad uu ku qoro sheeko xiiso leh ee taariikhda Premier League” – Gary Neville
(London) 10 Nof 2020. Halyeeyga Manchester United ee Gary Neville ayaa xaqiijiyay in haddii uu Jose Mourinho kula guuleysto hanashada Premier League kooxda Tottenham Hotspur, ay noqon doonto mid ka mid ah sheekooyinka xiisaha badan ee taariikhda horyaalka.
Gary Neville ayaa inta uu ku gudi jiray falanqeyntiisa shabakada “Sky Sports” ee dalka England ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan dhahay todobaad ka hor in Spurs aysan ku guuleysan karin horyaalka, walina uma maleynayo inay awoodaan taas”.
“Laakiin waxaan ku raacsanahay Jamie Carragher inay noqon doonto sheekada ugu layaabka badan in la arko Jose Mourinho oo horyaalka Premier League kula guuleysanaya Tottenham”.
“Waxay noqon doontaa wax heegan geliya taageerayaasha Chelsea, Manchester United iyo Arsenal. Waxay noqon doontaa mid ka mid ah sheekooyinka ugu waa weyn, sababtoo ah Tottenham kuma guuleysato horyaalka!”
“Waxa uu heystaa labo ciyaartooy oo weerarka ah oo arrintan sameyn kara, ka fikirida awooda weerarka, waa wax wanaagsan”.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda Tottenham Hotspur ayaa ku jirta kaalinta labaad ee miiska kala sarreynta horyaalka Premier League, iyagoo aruursaday 17 dhibcood kaddib 8 kulan ay ciyaareen.
Pjanić oo si cad u sheegay hal sabab uu isaga diiday dalab kaga yimid kooxaha Inter iyo Bayern Munich
“Atlético Madrid ayaa ka fiican Barcelona iyo Real Madrid” – Álvaro Morata